February 2019 – Page 2 – siifsiin
Caaltaa: Hiphi ykn hibib ykn libbakka Caaltuu: Haati nama laalti ilmoon Caalaa: Qawwee fi rasaasa
CIIGOO Afaan Oromoo
Ciigoon akaakuu Afoolaa keessaa isa tokko yoo ta’u, jiruuf jireenya ummataa keessatti seenaa,aadaa, duudhaa, jaalala jibbaa, gaddaaf gammachuu, amantaa shakkii, waliin jireenyaa waldhabiinsa, tokkummaa garaagarummaa, tolaa hammeenya, kkf ittiin ibsachuuf bu’aa guddaa qaba. Kana malees, wanti dubbannu sirritti akkaisa ta’uu fudhatama argatuuf nu tajaajila. Ciigoon garee jechootaa, gaalee, ykn hima ta’ee dubbii dachaa ta’e … Continue reading CIIGOO Afaan Oromoo
Midhaan ungulaaluu yoom jalqaban laata?
Yeroo daa’imummaa naannoo manaa irraa fagaadhee hin deemnetti ogummaa midhaan ungulaaluu shamarreen ykn dubartootni hojjetan ilaalaan ture. Ungulaaluu sana keessatti midhaanis ta’e maaxxoon (daggalli) kallattii tokko keessa marsaan yaa’u. Marsaa n yaa’uun sun aartii nama hawatu qaba. Ungulaaluun kun yoo gara harka mirgaas ta’e gara harka bitaatti buufachuun ungulaalan garaagarummaa hin qabu. Maaxxoon garuu midhaan … Continue reading Midhaan ungulaaluu yoom jalqaban laata?